Liberia:Nomena Anjara Masoandro Indray Ny Fahalalahan’ny Asa Fanaovan-gazety · Global Voices teny Malagasy
Liberia:Nomena Anjara Masoandro Indray Ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovan-gazety
Voadika ny 05 Desambra 2011 12:52 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, English
Namome fotoana kely nisehoan'ny rariny ny fitsarana mikasika ny fanakatonana ny haino aman-jery nahitana fifanoheran-kevitra tany Liberia. Nakaton'ny governemanta Liberiana ny tranon'ny haino aman-jery miisa telo (Love FM/TV, Power FM/TV ary ny Kings FM) tamin'ny 7 novambra 2011 noho ny fitorohana azy ireo no nanely hafatra fifankahalana toa hitarika herisetra. Nisedra kiana avy amin'ny Liberiana maro izany fanakatonana tranonà haino aman-jery izany.
Noterena hikatona ireo toerana ireo noho ny fitoriana nataon'ny Ministry ny Fitsrana Christiana Tah sy ny Ministry ny Vaovao Cletus Sieh.
Na izany aza, namaoka didy ny mpitsara James Zota ny hanokafana indray ireo haino aman-jery nakatona ireo no sady niaro ny heviny nilaza fa na dia mendrika sazy tokoa aza ny zavatra nataon'ireo meloka raha ny lalàna no jerena, dia tsy tokony hametraka sazy hoan'ireo meloka mihitsy akory ny fitsarana, na dia zony aza izany, mba ho ezaka hitsinjovana ny fahalalahan'ny haino aman-jery eto Liberia.
Manome fintina iray momba ilay didy ao amin'ny Fifidianana Liberia 2011 Vondrona Mpanaramaso ny Haino aman-jery , hoy i Mohammed Ali nanoratra:
Vao avy namoaka didy manameloka ireo haino aman-jery ny Fitsarana Heloka Bevava A mifototra amin'ny piesy natolotry ny governemanta. Hoy ny Fitsarana hoe voaporofon'ireo piesy fanamarinana avy amin'ny governemanta ireo fa tena niditra tamin'ny fanapariahana hafatra fankahalàna marina tokoa ireo haino aman-jery telo ireo. Na izany aza, hoy ny Fitsarana hoe hatramin'ny fihaonana teo amin'ny ireo haino aman-jery 3 sy ny governemanta fa tsy fitsarana, dia tokony mbola hisokatra ireo trano ireo, arahina fampitandremana mafy fa hakatona tanteraka izy ireo raha mbola mamerina indray ireo hafatra fankahalana ireo.
Ny fampihavanana no tena lalana tsara: Mpikambana roa amin'ireo antoko politika lehibe ao Liberia mifandry tanana. Sary nahazoana alalana avy amin'ny Sarin'ny Fifidianana Liberia 2011 Vondrona Mpanaramaso ny Haino aman-jery.
Nandà ny fanakatonana amin'ny “fomba cowboy” sy ny fialantsiny amin'ny “fomba kangoro” ny tsikera iray hita ao amin'ny bilaogy African Election Project:
Mety hoe mendrika kokoa angamba raha hoe atomboka amin'ny fanatonana ny hafa aloha mba hiampangàna tsotra izao, hanamelohana ary handàvana ireo fanakatonana amin'ny fomba cowboy natao ireo vondrona haino aman-jery telo eto an-toerana ireo, sy ny fialantsiny amin'ny fomba fanao kangoro izay nisolo ny “azafadin”-izy ireo. Tena mahamenatra sy mahasosotra mihitsy hoe tsy maintsy handia ny làlana maizina i Liberia rehefa avy nizaka ny ady sivily nahatsiravina noho ny fanenjehana ara-politika sy ny fitsarana mitongilana.
Maninona ny governemanta no manakimpy ny masony manoloana ny “gazetiboky tsy fantatra akory izay tompon'andraikitry ny fanoratana” izay “milatsaka avy any an-danitra “?:
Iray andro na mahery talohan'ny fifandonana tamin'ny faha 7 Novambra, gazetiboky iray tsy nisy tompon'andraikitry ny fanoratana no nilatsaka avy any an-danitra ary nozarazaraina maimaim-poana no mamaritra ireo Liberiana sasany ho mpamafy korontana, mpanararaotra ary mampiahiahy. Tsy niloa-bava na kely akory aza ny governemanta manoloana izany. Fanaovan-gazety tia tanindrazana izany. Nandritra ny fampielezan-kevitra eny fa na dia amin'izao anio izao aza, dia mbola manohy manaratsy an'ireo antoko politika sasany sy mpanao politika “ny haino aman-jery mpisolelaka” amin'ny governemanta. Tsy sanatria akory “hafatra fanaratsiana” na “manohina ny filaminana” ireo lahatsoratra ireo …
Kokitaily Molotov nisy nanipy tao amin'ny Love FM tanatin'ny herisetra taorian'ny fifidianana. Sary nahazoana alalana avy amin'ny Fiombonamben'ny Asa fanaovan-gazety any Liberia.
Vote4Africa vondrona iray mpisolovava no namehy ny tranga ao amin'ity bitsika eto ambany ity:
@vote4africa : #Liberia: tranona haino aman-jery 3 nolazaina fa meloka noho ny fitarihana fankahalana, nefa tsy nomena sazy:
R.S.W. Chea, Liberiana iray mpisolavava , mpampianatra, ary mpitory teny no nisafidy ny hiresaka ny raharahq tao amin'ny tambajotra sosialy Cafe L.I.B miainga avy amin'ny fàkany raha miresaka ireo olana telo mikasika ireo antontan-taratasy atrehan'i Liberia : ny kolikoly, ny tsy fahalalana, ary ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra [seha-pifandraisana tambajotra eran-tany ho an'ireo Liberiana sy ny naman'i Liberia ny Cafe L.I.B, izay mitaky teny fanalahidy]:
Raha eo anatrehan'ny fanapotehana ny fananam-panjakana sy ny an'ny olon-tsotra amin'izao fotoana izao, dia tokony ho olan'ny Liberiana rehetra ambony noho ny politika sy ny baikon'antoko ity olana ity. Raha resaka fandrosoana, dia efa tara lavitra amin'ny fandrosoana isika, ary hatraiza no mbola tsy handrosoantsika? Mamerina antsika lavitra any aoriana eo amin'ny sehatra ara-toekarena, ara-tsosialy, ary ara-toetsaina ireny fandoroana tranona haino aman-jery, tranobe, ary fiaran'ny governemanta ireny. Anisan'ny antony mahatonga antsika ho eto amin'izao toerantsika izao izany. Maro olana isika eto Liberia ary dia saika avy amin'ny tsy fisian'ny fitiavan-tanidrazana izany, fa ny tena lohalaharana amin'izany dia ireto olana telo lehibe ireto, indrindra ny kolikoly, ny tsy fahalalana, ary ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra. Na izany aza, dia tanisaiko vetivety foana ny tsy fahalalana sy ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra ary tohizako amin'ny olana eo amin'ny toetra sy fitondran-tena tsy tia tanindrazana asehontsika. Jereo tsara fa tsy mitovy dika ireo roa ireo (ny tsy fahalalana sy ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra) , fa samihafa, na dia mifameno aza.
Nofehezin'i @africareview tamin'ny teny fohy, nefa kosa dia voambolana tena mahadika azy tsara ilay tranga :
Nomen'ny Fitsarana famotsoran-keloka ireo mpilaza vaovao tao # Liberia
Hoy i @Leo_Johnson, tanora vao misondrotra sady mpandefa bitsika avy any Liberia:
Haino aman-jery hita fa meloka noho ny fanaparitahana hafatra fankahalana tany Liberia
Na talohan'ny namoahan'ny fitsarana didy hanokafana indray ireo haino aman-jery aza dia efa nisy ireo Liberiana monina any ivelany nilaza ny heviny tamin'ny lafiny maro. Nanoratra izao i Jerome Gayman avy any Fort Pierce, Florida, Etazonia (US):
Raha nandeha niasa aho iny Talata maraina iny, ny zavatra voalohany nanotanian'ny lehibeko ahy dia hoe ‘Fa inona ity mahazo ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety? Fa inona inona ity mahazo ny zon'olombelona? “Tato ho ato aho izao nirona kokoa tany amin'ny nahavoafidy indray an'i Ellen satria tena nanao zavatra tsara ho an'ny firenena izy toy ireo karazana fandrosoana nentiny nefa tsy mba hitanay tamin'ny fotoan'andronay. Ary dia tena nitolagaga aho teo amin'ny fitantanany ny zavatra telo izay tena nanomezako azy isa tena ambony tokoa: ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety, ny fandrosoana ara-toekarena, ary ny zon'ny vehivavy. Saingy tena tohina kosa aho nandre ireo zava-niseho ny Alatsinainy.
Manan-jo hanao fihetsiketsehana ireo mpanao hetsi-panoherana. Mampahatsiahy ny tamin'ny Firohotanana ho an'ny vary tamin'ny 14 Aprily izany ary tena tsy mino mihitsy aho hoe niseho teo ambany fitantanany izany zavatra izany. Ny tiako ho tenennina dia ho an'ny olona rehetra, ahoana no mahatonga an'izany hiseho ao anatin'ny fotoam-pitantanany?
Tsy mitovy amin'i Jerome, nanazava i Moses Dolo avy any Tigard, Oregon, Etazonia , ary nisafidy làlan-kafa:
Mampalahelo anay ny fahafatesan'ny Liberiana na iza na iza, fa manana andraikitra hiaro ny ankamaroan'ny vahoaka Liberiana ny governemanta. Tsy tokony hitarika ny vahoaka amin'ny herisetra noho ny fitiavan-tenany ireo mpanao politika sy ny haino aman-jery.
Namelabelatra lavitra kokoa i Kadiatu Henry , ramatoa Liberiana monina any Pennsylvania, Etazonia :
Raha ny hevitro, dia tafahoatra ny fihetsiky ny governemanta. Nila nilefitra kely ny polisy eny fa na dia hoe voatery hanapoka basy aza izy ireo dia tokony nanao tifi-danitra fa tsy eny amin'ny olona, indrindra hoe taorian'ny nampiasan-dry zareo baomba mandatsa-dranomaso. Ho an'ireo tranona haino aman-jery nakatona, dia sarotra ny mampitovy ny mizàna eo amin'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety sy ny tsy fahaizana mampiasa ilay fahalalahana. Mety hoe tsy nety ny nanakatonana azy ireo, tokony ho takatry ny governemanta ihany koa ireo loza ateraky ireo tantara mahatsiravina diso tafahoatra matetika ataony, indrindra fa hoe hatao amin'ny andro ho avy io ny fifidianana.
Nanoro hevitra i Trouble Sayeh avy ao Columbus, Ohio, Etazonia, fa mety ho marika famantarana amin'ny korontana ho avy izany:
Raha ny hevitro, ireo hetsika roa famonoana an-kerisetra nataon'ny polisy sy ny fanakatonana ireo haino aman-jery dia nandresy lahatra ahy izao fa mody nalefaka fotsiny i Ellen tamin'ny voalohany mba hampandriana adrisa an'ireo Liberiana. Izao amin'ny fihodinana faharoa izao, dia mety ho hasehony amin'izay ny ratsy ao aminy satria tsy mila ny vaton'ny vahoaka Liberiana intsony izy.
“Amin'ny fo tsy miangatra, tena gaga aho saingy tsy hoe akory amin'ny maha-mpitarika Afrikana azy izay mety hahvita hanao izay fanovana tiany amin'ny fotoana rehetra tiany, eny fa na dia midika aza izany hoe avy amin'ny tsaratsara ho amin'ny afobe. Aleo jerena ny fihodinana faharoany. Mety ho fambàra korontana maro izany.”
Tantaran'ny Afrika Mainty farany
Paortiogaly : mpikatroka ho an'ny zon'olombelona mitolona manohitra ny fanavakavahana, notolorana loka iraisampirenena
Ginea-Bisao 2 andro izay
Fatiantoka ho an'i Wisconsin ny fahazoan'i Lagos fiaran-dalamby
Amerika Avaratra 3 andro izay
Enda, kirarom-pihazakazahana voalohany avy ao Kenya manantena ny hahomby amin'ny sehatry ny fanatanjahantena manerantany
Kenyà 1 herinandro izay